Moon Facies (လဝန်းမျက်နှာ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Moon Facies (လဝန်းမျက်နှာ)
Moon Facies (လဝန်းမျက်နှာ) ကဘာလဲ။
ဖြစ်နိုင်ခြေကို မြင့်မားစေသော အရာများ
Moon Facies (လဝန်းမျက်နှာ) ဆိုတာ ဘာလဲ။
မျက်နှာက ဖောပြီး ဝိုင်းဝိုင်းကြီးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ Moon Facies ရှိနေပါပြီ။ Moon Facies ကို လပြည့်ဝန်းမျက်နှာလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ စိုးတော့ မစိုးရိမ်ရပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း မလုံမလဲကြီးတော့ ဖြစ်နေတာပေါ့။
လပြည့်ဝန်းမျက်နှာဟာ အဆီတွေ မျက်နှာရဲ့ တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ စုပုံလာလို့ ဖြစ်လာရတာပါ။ တော်တော်များများကတော့ အဝလွန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေမယ့် Cushing’s syndrome ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း Cushingoid ပုံစံလို့လည်း ပြောကြပါသေးတယ်။ Cushing’s syndrome ဆိုတာဟာ ခန္ဓါကိုယ်က Cortisol ဆိုတဲ့ ဟော်မုန်းကို အချိန်ကြာကြာ ထိတွေ့တဲ့ အခါမှာ ဖြစ်လာတဲ့ ရောဂါပါ။
Moon Facies(လဝန်းမျက်နှာ)က ဘယ်လောက်အဖြစ်များလဲ။
အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရှောင်သည့်များကို ရှောင်၊ ဆောင်သင့်သည်များကို ဆောင်ပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ချပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ်သိရှိလိုသည်များအတွက် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Moon Facies(လဝန်းမျက်နှာ)ရဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
လပြည့်ဝန်းမျက်နှာရဲ့ အဖြစ်များတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ မျက်နှာက ပြည့်ပြည့်ဖောင်းဖောင်းဝိုင်းဝိုင်းကြီး ဖြစ်လာတာပါ။ အဆီတွေစုပုံလာခြင်းကြောင့် မျက်နှာရဲ့ တစ်ဖက်တစ်ချက်စီဟာ ဝိုင်းဝိုင်းကြီးဖြစ်လာပြီး ရှေ့မှကြည့်ရင် နားကို မမြင်ရတော့ပါဘူး။ ဦးခေါင်းခွံရဲ့ တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ အဆီတွေဆုပုံလာခြင်းကလည်း မျက်နှာကို ပိုဝိုင်းလာတယ်လို့ ထင်ရစေပါတယ်။
ဘာတွေက Moon Facies(လဝန်းမျက်နှာ)ကို ဖြစ်စေတာလဲ။
ဓါတ်မတည့်ခြင်းများ (နှာမွှန်ခြင်း၊ အမှုန်ကြောင့် နှာဆီးချောင်းဆိုးခြင်း၊ ပျားတုပ်ခြင်း)
အက်စပရင်၊ ပန်နီစလင်၊ ဆာလဖာ၊ ဂလူကိုကောတိကွိက် နှင့် အခြားသောဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
ဦးခေါင်း၊ နှာခေါင်း၊ မေးရိုး ခွဲစိတ်မှုများ
မျက်နှာသို့ ထိခိုက်အနာတရရခြင်းများ ဥပမာ အပူလောင်ခြင်း
မျက်လုံးပတ်ပတ်လည်တွင် ပိုးဝင်ပြီး ရောင်ရမ်းကာ အဖုများထွက်နေခြင်း
Hyperadrenocorticalism/ hypercortisolism ။ အထူးသဖြင့် Cortisol ကဲ့သို့သော ဟော်မုန်းများ အထွက်များနေခြင်း
Prednisone လိုမျိုး စတီးရွိုက်များကို ရေရှည်သုံစွဲခြင်း။
Moon Facies(လဝန်းမျက်နှာ)ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားစေသော အရာတွေက ဘာတွေလဲ။
Moon Facies ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားစေသော အရာများကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုတ်တရက်နာကျင်ခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာ မျက်နှာ ရောင်ရမ်းခြင်း
အချိန်တော်တော်ကြာ မျက်နှာရောင်ရမ်းခြင်း၊ ပိုဆိုးသွားခြင်း
ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သော ဖျားခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ နီရဲနေခြင်း
အောက်ဖော်ပြမည့် အကြောင်းအရာသည် ဆေးပညာအကြံပေးချက်များ၏ အစားထိုးမဟုတ်ပါ။ နောက်ထပ်သိရှိလိုသည်များအတွက် ဆရာဝန်ဖြင့် အမြဲတစေ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Moon Facies(လဝန်းမျက်နှာ)ကို ဘယ်လို စစ်ဆေးအတည်ပြုမှာလဲ။
ဆရာဝန်က အရင်က ဘာရောဂါတွေ ဖြစ်ဖူးလဲ၊ ဘာတွေလုပ်ဖူးလဲ၊ မကြာသေးခင်က ထိခိုက်ထားတာတွေ ရှိလား မေးပါလိမ့်မယ်။ ယင်းက ကုသမှုရွေးချယ်ခြင်းနှင့် နောက်ထပ် စစ်ဆေးချက်တွေလိုလား၊ မလိုဘူးလား ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ များသောအားဖြင့် ဆရာဝန်က Moon Facies ရဲ့ ရောဂါရင်းမြစ်ကို ရှာဖွေပြီး ကုသမှုကို ရွေးချယ်မှာပါ။
Moon Facies ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဆိုတာ Cortisol တိုင်းတဲ့ အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က ဆီးစစ်၊သွေးစစ်တာတို့ ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ Cortisol မြင့်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ သိရဖို့အတွက် MRI နဲ့ CT scan ကဲ့သို့သော အခြားစစ်ဆေးချက်တွေ လိုပါအုန်းမယ်။
Cushing’s syndrome။ Cushing’s syndrome ကို စစ်ဆေးအတည်ပြုဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ မျက်နှာဖောခြင်းကဲ့သို့သော လက္ခဏာတွေက အခြားအခြေအနေတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြားသိသာထင်ရှားတဲ့ လက္ခဏာတွေနဲ့ အတူ Moon Facies က ပိုမိုဆိုးဝါးလားမယ်ဆိုရင်တော့ Cushing’s syndrome ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အဆီတွေက လည်ပင်း၊ ဗိုက်၊ ကိုယ်လုံးတို့မှာ စုလာပြီး ခြေတွေလက်တွေကတော့ ပိန်ပိန်လေးတွေပဲရှိနေတာမျိုးပါ။ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့အလယ်ပိုင်းမှာပဲ ဝနေတာမျိုးက Cushing’s syndrome ရဲ့ အဖြစ်များတဲ့ လက္ခဏာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း Diet နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းအရမ်းလုပ်တဲ့ လူတွေဆိုရင်တော့ ယင်းလက္ခဏာတွေ အနည်းငယ်တော့ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးကုသမှုမှတ်တမ်း။ စတီးရွိုက်များရေရှည်သုံးစွဲခြင်းကဲ့သို့သော ဆေးကုသမှုမှတ်တမ်းများကို မေးမြန်းပါလိမ့်မယ်။ Prednisone လိုမျိုး စတီးရွိုက်တွေ ရေရှည်သုံးစွဲခြင်းက Cushing’s syndrome နဲ့ ဆင်တူတဲ့ လက္ခဏာတွေ ပေးပါလိမ့်မယ်။ အမေရိကန်လူမျိုး သန်းနှင့်ချီသောက်ကာ တော်တော်များများကလည်း moon facies ရကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အကြောင်းအရင်းကို မသိကြပါဘူး။ အမှန်တကယ်ကတော့ အဆီဖြန့်ဖြူးမှုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတူ ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာခြင်းဟာ စတီးရွိက်အသုံးပြုခြင်းကြောင့် အဖြစ်များတဲ့ လက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုပါ။ ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့ ဘယ်လောက်သုံးတယ်၊ ဘယ်လောက်ကြာကြာသုံးတယ်အပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ စတီရွိုက်ကြောင့် အစားစားများများစားလာခြင်းက ကိုယ်အလေးအချိန်တိုးလာစေပါတယ်။ စတီးရွိုက်သောက်ဆေးတွေကြောင့် ယင်းလက္ခဏာတွေ ဖြစ်တာပါ။ လူသိနည်းတာကတော့ ထိုလက္ခဏာတွေဟာ စတီးရွီုက်ထိုးဆေး၊ ရှုဆေးတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတာပါ။
Moon Facies(လဝန်းမျက်နှာ)ကို ဘယ်လို ကုသမှာလဲ။
ဆရာဝန်က Moon Facies ရဲ့ ရောဂါရင်းမြစ်တွေကို အောက်ပါအတိုင်း ကုသပါလိမ့်မယ်။
Cushing’s syndrome ကုသခြင်းက ယင်းကို ဘာကဖြစ်စေတာလဲ အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ တစ်ချို့မှာ အကျိတ်ကို ဖယ်ရှားပါလိမ့်မယ်။ တချို့မှာတော့ ဆေးဝါး၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့် ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်း ကုထုံးများဖြင့် ကုသပါလိမ့်မယ်။
စတီးရွိုက်တွေကို ကာလကြာရှည်သုံးသောကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးဖြတ်ရင်ဖြတ်၊ မဖြတ်ရင် လျော့သောက်တာက အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။ ဆက်လက်အသုံးပြုဖို့လိုနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်က ဆေးပမာဏတတ်နိုင်သမျှ လျော့ပေးဖို့ ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျန်တဲ့ နေ့တိုင်းမှာ ဆေးသောက်နေခြင်းက Cushing’s syndrome ရဲ့ လက္ခဏာတွေကို နည်းပါးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ယင်းကလည်း Moon Facies နဲ့ အခြား လက္ခဏာတွေ မသက်သာစေဘူးဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်က အခြား ကုသနည်းတွေနဲ့ ပြောင်းလဲကုသပါလိမ့်မယ်။
Moon Facies(လဝန်းမျက်နှာ)ကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ လူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေက ဘာတွေလဲ။
အောက်ပါ လူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေက Moon Facies ကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒဏ်ရာကြောင့် ရောင်ရမ်းခြင်းကို လျော့ချပေးဖို့ ရေခဲကပ်ပေးပါ။ မျက်နှာဖောခြင်းကို လျော့ချဖို့ အိပ်ရာရဲ့ ခေါင်းရင်းကို မြင့်မြင့်လေးထားပေးပါ (ခေါင်းအုံးများ ထပ်ထားပါ)။
မေးမြန်းလိုသည်များကို ပိုမိုနားလည်ပြီး အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Hello Health Group သည် ကျန်းမာရေးအကြံပြုချက်များ၊ ရောဂါရှာဖွေအတည်ပြုချက်များနှင့် ကုသမှုများ မပြုလုပ်ပေးပါ။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတ် 20, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 12, 2019
1. Moon Facies. http://www.webmd.com/a-to-z-guides/moon-facies#1. Accessed 10 Oct, 2016
2. Facial swelling. https://medlineplus.gov/ency/article/003105.htm. Accessed 10 Oct, 2016